04/26/12 ~ The Ahmadi Post : Myanmar
April 26, 2012 S.M Osman 1 comment
အစ္စလာမ်တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ်သခင်(ဆွ) နှင့် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်
အစ္စလာမ်၏အနက်အဓိပ္ပာယ်မှာ " ငြိမ်းချမ်းခြင်းနှင့် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏အလိုတော်အတိုင်း ပျပ်ဝပ်နာခံခြင်း " ဟုရရှိပေသည်။ဤသာသနာသည် နှစ်ပေါင်း (၁၄ဝဝ) ကျော်အလျှင်က အာရေဗျနိုင်ငံတွင် တမန်တော်မြတ်မိုဟမ္မဒ်သခင်(ဆွ) ယူဆောင်လာသောသတင်စကားဖြစ်သည်။ မိုဟမ္မဒ်သခင်သည် အလ္လာဟ့်ထံတော်မှ " အလ္လာဟ်တစ်ပါးတည်းသာလျှင် ခဝပ်ကိုးကွယ်ခြင်း ခံထိုက်ပြီး အခြားမည်သူမျှ အရှင်မြတ်နှင့် တူညီသူမရှိချေ။ အစ္စလာမ်သာသနာသည် လူသားတို့အတွက် နောက်ဆုံးနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော သာသနာဖြစ်သည်" ဟူ၍ဗျာဒိတ်တော် ရရှိပေသည်။
မိုဟမ္မဒ်သခင်သည် ဆင်းရဲသားများကိုကူညီရိုင်းပင်သည်။ကျေးကျွန်များကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရစေခဲ့သည်။ အမျိူးသမီးများအတွက် တူညီသောရပိုင်ခွင့်နှင့် တူညီသောအခွင့်အရေးများကိုချမှတ်သည်။ ကိုယ်တော်သည်မိမိနောက်လိုက်များအား အခက်အခဲများနှင့်ကြုံတွေ့ရစဉ်သည်းခံပြီး အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်တွင် ဆုတောင်းလျှက်နေကြရန်သွန်သင်သည်။ သခင်၏တာဝန်မှာမကောင်းမူဒုစရိုက်များနှင့် ညီမျှမူမရှိခြင်းများကိုဖယ်ရှား၍ ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့်ဘာသာတရားကိုင်းရှိင်းမူကိုချမှတ်ပြီး လူသားများကိုဖန်းဆင်းရှင်နှင့်နီးစပ်မှု ရရှိရေးအတွတ်ခေါ်ယူ ဆောင်ကြဉ်းပေးရန်ဖြစ်သည်။ မိုဟမ္မဒ်သခင်(ဆွ)သည်ရိုးသား၍စိတ်ထားမြင့်မြတ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းသည့်ဘဝဖြင့်နေထိုင်ခဲ့သည်။
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်သည်အစ္စလာမ်သာသနာ၏ မြင့်မြတ်သည့်ကျမ်းစာဖြစ်သည်။ ထိုကျမ်းတော်သည် တမန်တော်မြတ်မိုဟမ္မဒ်သခင်(ဆွ)ထံသို ့အလ္လာဟ်အရှင် မြတ်ထံတော်မှ နှစ်ပေါင်း(၂၃)နှစ်တိုင်တိုင် ပိုချခဲ့သောအလ္လာဟ်အရှင်ထံတော်မှာနူတ်ကပါဌ်တော်များဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းတွင် အပိုင်း (၃ဝ) ပါရှိပြီး အခန်း (၁၁၄) ခုခွဲထားသည်။ကျမ်းတော်တွင်သွန်သင်ချက် အမြောက်အများပါရှိပြီး လူသားများလိုက်နာကျင့်ကြံရန် လွယ်ကူရှင်းလင်းသော ဥပဒေသများပါရှိသည်။ထိုအပြင် ကြိုတင်အနာဂတ်ဟောကိန်းအမြောက်အများပါရှိပြီး များစွာတို့မှာ ဟောကြားထားသည့်အတိုင်းမှန်ကန် ပြည့်စုံပြီးလျှင် ဖြစ်ပေါ်ပြည့်စုံရန် အကြောင်းများစွာလည်ရှိပေသေးသည်။
အစ္စလာမ်က မိုဟမ္မဒ်၊ အာဗြာဟံ၊ ရှင်မောရှေ၊ ယေရှုခရစ်တော် ၊ ကရစ်သျှနားကိုယ်တော် ၊ ကွန်ဖျူးရှပ်၊ ရှင်တော်ဂေါတမဗုဒ္ဓနှင့် ဇရာသုစတြာ (အားလုံးအပေါ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းသက်ရောက်ပါစေ) အပါအဝင် အားလုံးသော သာသနာ့အလင်းပြပုဂ္ဂိုလ်များကို လက်ခံယုံကြည်စေသည်။ အစ္စလာမ်က ထိုအရှင်သူမြတ်အားလုံးတို့ကို ကောင်းကင်ဆိုင်ရာ ဆရာသခင်များဟုမှတ်ယူပြီး လူကျင့်ဝတ်များကို ပြုပြင်ပေးရန်နှင့် ဖန်ဆင်းရှင်ထာဝရဘုရားရှင်နှင့် ဆက်သွယ်ပေါင်းဆုံမှုကို အခြေချရန်အတွက် စေလွှတ်ခြင်းခံရသည်ဟုခံယူသည်။ အမျိုးမျိုးသော ယုံကြည်ချက်ဘာသာတရား တို့၏ မူလသင်ကြားချက်တရားတော်မှာ တစ်ဆူတည်းသော ထာဝရဘုရားရှင်ထံတော်မှလာရှိသည်ဟု အစ္စလာမ်က သက်သေပြဆိုသည်။
အစ္စလာမ်သည် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ထို့ပြင် လူမျိုးနွယ်အားလုံးတို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရှေ့တော်မှောက်တွင် တန်းတူဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကောင်းမှုပြုကျင့်ခြင်းများ၌သာလျှင် တစ်ဦးထက်တစ်ဦး အဆင့်မြင့်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အလေးအနက်ထားဖော်ပြပေသည်။ လူသားအချင်းချင်း ဆက်ဆံရေး၌ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေး၌ဖြစ်စေ၊ စီးပွားရေးသို့မဟုတ် သာသနာရေးဆိုင်ရာ၌ဖြစ်စေ မည်သည့် ကဏ္ဍ၌မဆို ကိုယ်ကျိုးဖက်၍ အများနစ်နာအောင်ပြုခြင်းကို အစ္စလာမ်က လုံးဝခွင့်မပြုပေ။
အစ္စလာမ်သည်လူသားအချင်းချင်းစာနာထောက်ထားမူနှင့်လူတစ်ဦးချင်း၏လွတ်လပ်မူ ကိုထောက်ခံသည်။ လူသားအားမိမိကိုးကွယ်မည့်ဘာသာကိုမိမိကိုယ်တိုင်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ် ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟူသော အခြေခံမူလလူ့အခွင့်အရေးကို အသိပေးသည်။ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်က
" ဘာသာရေးတွင် အတင်းအကျပ်ပြုမူမရှိ " ဟုအတိအလင်း ဖော်ပြထားသည်။ (ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာ အခန်းကြီး၂ အခန်းငယ် ၂၅၇)
ကမ္ဘာ့သာသနာကြီးများအားလုံးသည် မိမိတို့ဘာသာ၏ ကျမ်းစာအသီးသီးတွင် ဟောကြားထားသည့်အတိုင်း ကမ္ဘာ့နောက်ပိုင်းနေ့များဖြစ်သည့် နှေင်းခေတ်ကာလတွင် ပွင့်ပေါ်လာရောက်မည့် ကတိတော်ထားရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို စောင့်မျှော်လျှက်ရှိကြပေသည်။ ဟိန္ဒူများသည် "ကရစ်သျှနားကိုယ်တော်" ကိုလည်းကောင်း ဂျူးနှင့် ခရစ်ယာန်တို့သည် " မေရှိယကယ်တင်ရှင် " ကိုလည်းကောင်း၊ မွတ်စလင်များသည် " မဆီဟ်နှင့် မဟ်ဒီ " ကိုလည်းကောင်း စသဖြင့် အသီးသီးစောင့်မျှော်လျှက်ရှိနေကြပေသည်။ ထာဝရဘုရားသခင်၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် အဟ်မဒ် သခင် (ငြိမ်းချမ်းခြင်းသက်ရောက်ပါစေ) က အမှန်စင်စစ် အများစောင့်မျှော်နေကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဘာသာတိုင်းတွင် တစ်ဦးစီ သီးသန့်ပွင့်ပေါ်မည်မဟုတ်ဘဲ ဘာသာအသီးသီးက ကတိတော်ထားရှိသည့် အရည်အသွေးအမျိုးမျိုးဖြင့် တစ်ဦးတည်းသာ ပွင့်ပေါ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လူသားအားလုံးသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တစ်ခုတည်းသော သာသနာတော်အတွင်းသို့ ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာလေသည်။ အဟ်မဒီယာ အဖွဲ့ကြီးကို တည်ထောင်သူ အဟ်မဒ်သခင် က မိမိသည် ဘာသာတရားအသီးသီးက စောင့်မျှော်လျှက်ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာလေသည်။
အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့သည် အစ္စလာမ်ဘာသာ၏ သန့်စင်မွန်မြတ်မှုအားလုံးနှင့်အတူ စစ်မှန်သော အစ္စလာမ်ဘာသာကို သွန်သင်သည်။ အစ္စလာမ်သည်ငြိမ်းချမ်းရေးသာသနာဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်ပြောင်းလဲနေသော ကမ္ဘာ၏ လိုအပ်သော တောင်းဆိုချက်များနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည့် သာသနာဖြစ်ကြောင်း တင်ပြသည်။
အစ္စလာမ်သည် လုံးဝဥဿုန် စိတ်ဓာတ်မွန်မြတ်မှုနှင့် အကျင့်စာရိတ္တမြင့်မားရေးကို အလေးအနက်ယုံကြည်ပြီး လူသားတို့၏ အရေးကိစ္စအခြေအနေအရပ်ရပ်တို့တွင် တရားမျှတခြင်းနှင့် သာတူညီမျှရှိခြင်းအရာ၌ မိတ်ဆွေနှင့် ရန်သူခွဲခြားမှုမရှိ တူညီစွာ ဆက်ဆံမှုပြုရန် သွန်သင်သည်။ ယနေ့လူသားတို့ ကြံုတွေ့ခံစားနေရသော လူမှုဘဝ၏ ဝေဒနာအဖုံဖုံ ရောဂါအစုံစုံတို့အတွက် အစ္စလာမ်သည် ကုစားရာဖြစ်သည်ဟု အဟ်မဒီယာမွတ်စလင် အဖွဲ့ကြီးက အခိုင်အမာယုံကြည်သည်။ အစ္စလာမ်ကသင်ပြသည်ကား လူသားသည် မိမိနှင့် ဘဝတူလူသားအချင်းချင်း ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ခြင်း မပြုလေသမျှ ဘုရားသခင်နှင့်လည်း ငြိမ်းချမ်းစွာ နေနိုင်မည်မဟုတ်ချေ။ အစ္စလာမ်တွင် လူတိုင်းအဖို့ငြိမ်းချမ်းခြင်းနှင့် စိတ်နှလုံး၏ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ရရှိနိုင်သည်။ ဤသည်ကား ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အတိုင်း ပျပ်ဝပ်နာခံမှု၏ အသီးအပွင့်ပေတည်း။
ဤခိုင်မာသောယုံကြည်ချက်ဖြင့် အဟ်မဒီယာမွတ်စလင် အဖွဲ့အစည်းသည် လျင်မြန်စွာကြီးထွားလျှက်ရှိပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဆင့်သို့ရောက်ရှိ၍ ကမ္ဘာ့ဒေသတိုက်ကြီးများတွင် ပျံ့နှံ့လျှက်ရှိရာ ယနေ့နိုင်ငံပေါင်း (၁၉၈) ခုတွင် အဟ်မဒီယာအဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် အဟ်မဒီယာအဖွဲ့ဝင်ပေါင်း သန်း (၂ဝဝ) ကျော်ရှိပြီး နေ့စဉ်နှင့်အမျှ တိုးပွားလျှက်ရှိပေသည်။ ဤအဖွဲ့ကြီးသည် ယနေ့ကမ္ဘာတွင် အတက်အကြွဆုံးနှင့် အပြုသဘောဆောင်သည့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတွင် နေထိုင်ကြသော အဖွဲ့ဝင်တိုင်းသည် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာကြပြီး ငြိမ်းချမ်း၍ အလုပ်ကြိုးပမ်းကြကာ အများအကျိုးကို သယ်ပိုးလျှက်ရှိသော နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြပေသည်။
အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့ကြီးတွင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကြီးမြတ်သော ကျေးဇူးတော်ဖြင့် " အစ္စလာမ့်ခလီဖာစနစ် " တည်းဟူသော ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်မှုစနစ် ကောင်းချီးမင်္ဂလာတည်ရှိပေသည်။ " ခလီဖာစနစ် " (ဘုရားသခင်ထံတော်မှ ခန့်အပ်စေလွှတ်ခြင်းခံရသော တမန်တော်ကို အရိုက်အရာဆက်ခံသည့် ကိုယ်စားလှယ်) ဝိညာဉ်ရေးရာ ခေါင်းဆောင်မှုစနစ်ကို ကတိတော်ရမဆီဟ်သခင် ကပြန်လည်ဖော်ထုတ်၍ အသက်ဝင်စေခဲ့သည်။ သခင်ကြီး ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်ပြီးသည့်နောက်တွင် သခင်၏အရိုက်အရာကို ဆက်ခံသော ခလီဖာစနစ်က အဖွဲ့ကြီးကို မူဝါဒလမ်းစဉ်တစ်ခုတည်းပေါ်တွင် တစ်စည်းတစ်လုံးတည်းဖြင့် ချီတက်မပြတ်ရှိစေသည်။
အဟ်မဒ်သခင်၏ ပထမဦးဆုံးဆက်ခံသူ ခလီဖာမှာ " မော်လဝီ နူရွတ်ဒင်းန်သခင် " ဖြစ်သည်။ ကိုရ်အာန်ကျမ်းတတ်ပါရဂူ၊ ကျော်ကြားသော တော်ဝင်သမားတော် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၁၉၁၄ ခုနှစ်တွင် " မိရ်ဇာဘရှီးရွတ်ဒင် မဟ်မူဒ် အဟ်မဒ် သခင် " က ဒုတိယခလီဖာအရာကို ဆက်ခံခဲ့သည်။ အစ္စလာမ့် စာပေပါရဂူအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဘာသာတရားများဆိုင်ရာ စွယ်စုံပညာရှင်အဖြစ်လည်းကောင်း ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူဖြစ်သည်။ သခင်သည် (၅၁) နှစ်တိုင်တိုင် အဖွဲ့ကြီးကို ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုခဲ့ပြီး အဖွဲ့ကြီး၏ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းမှုအုပ်ချုပ်မှုအသွင်ဖြင့် အခိုင်အမာပြုလုပ်၍ စနစ်တကျအခြေချခဲ့သည်။ တတိယမြောက်ဦးစီးခေါင်းဆောင်အဖြစ် " မိရ်ဇာနာဆိရ်အဟ်မဒ်သခင် " ကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့သည်။ သခင်သည် တမူထူးခြားသော ဉာဏ်ပညာ၊ စာရိတ္တနှင့် ဝိညာဏတရားကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သူဖြစ်သည်။ သခင်သည် အာဖရိကနိုင်ငံများတွင် အထူးအရေးပါသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားခဲ့သည်။ ထို့နောက် (၁၉၈၂) ခုနှစ်တွင် " မိရ်ဇာသာဟိရ်အဟ်မဒ်သခင် " အား စတုတ္ထခလီဖာအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့သည်။ သခင်၏ ဦးဆောင်မှုသက်တမ်းတွင် အစ္စလာမ့် ပညာရေးစနစ်ကို အံ့မခန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး (၂၁) ရာစုတွင် အစ္စလာမ်သာသနာပြုစီမံကိန်းကို တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ချမှတ်ပြီး ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တု (Satellite) မှတဆင့် ရုပ်/သံ အစီအစဉ်များကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု စတင်ခဲ့သည်။
ယခုအခါတွင် အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းကြီးသည် ပဥ္စမမြောက် ခလီဖာ " မိရ်ဇာ မတ်စ်ရူရ်အဟ်မဒ်သခင် " ၏ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုမှုဖြင့် ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့တွင် နေထိုင်ကြသော အဟ်မဒီယာအဖွဲ့ဝင်အားလုံးသည် တစ်ခုတည်းသော အုပ်ချုပ်မှုအောက်၌ တစ်စည်းတစ်လုံးတည်းရှိလျှက် ခမ်းနားထည်ဝါသော ရွှေခေတ်ကြီးနောက်တစ်ခုကို ဖြတ်သန်းလျှက်ရှိကြပေသည်။ သခင်သည် အဖွဲ့ဝင်တိုင်းအား မျက်ခြေမပြတ် ကွပ်ကဲကြည့်ရှုနေပြီး သူတို့၏ခြေလှမ်းများကို မှန်ကန်တည့်မတ်မှုရှိစေရန်အတွက် ယုံကြည်အားကိုးပြုထိုက်သော လမ်းညွှန်ချက်များပေးလျှက်ရှိသည်။ ဤသို့ဖြင့် သခင်သည် အဟ်မဒီယာအဖွဲ့ကြီးကို တည်ထောင်သူ " ကတိတော်လာမဆီဟ်သခင် " ၏ သာသနာပြုလုပ်ငန်း ဆုံးခန်းတိုင်ပြီးမြောက်ရေးကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်လျှက်ရှိသည်။ အစ္စလာမ်သည် ငြိမ်းချမ်းသော သာသနာဖြစ်ကြောင်းကို ကမ္ဘာကြီးအား နားလည်သဘောပေါက်စေရန် သခင်က အထူးတလည် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။ သခင်က " အစ္စလာမ်သည် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်ဟူသမျှကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း " ကို စစ်မှန်သည့် အစ္စလာမ့်သဘောတရားများချပြလျှက် အခါမလပ်သွန်သင်မိန့်ကြားလျှက်ရှိသည်။ ထို့ပြင်
" အစ္စလာမ် " ဟူသော ဝေါဟာရသည်ပင် " ငြိမ်းချမ်းခြင်းနှင့် ငြိမ်ဝပ်ခြင်း " ဖြစ်ကြောင်းကို ရှင်းလင်းတင်ပြနေပေသည်။
အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့သည် အစ္စလာမ့်အစုအဖွဲ့များအတွင်း၌ အခြေအနေ၊အချိန်ကာလအားလျော်စွာ ဖြစ်ပွားနေသော အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ ပုံစံဟူသမျှကို ဖယ်ရှားပြစ်ရန် ဦးဆောင်လျှက်ရှိသည်။ အစ္စလာမ်သာသနာတွင် မိမိဘက်မှ ဦးစွာရန်လို၍ ဓားလက်နက်ဖြင့် ဂျီဟာဒ်ပြုခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်းကို ရာစုနှစ်တစ်ခုကျော်လောက်ကတည်းကပင် အဟ်မဒ်သခင်က အသေအချာရှင်းပြ ကြေငြာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သခင်က " သွေးမြေကျမှုမဖြစ်သည့် ဆင်ခြင်တုံတရား၊ အသိဉာဏ်ပညာဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ရသော ဂျီဟာဒ် ' ကလောင်တိုက်ပွဲ ' မှာမူ
ဖွင့်လှစ်ထားလျှက်ရှိသေးကြောင်း " မိမိ၏ နောက်လိုက်အဖွဲ့ဝင်များကို သင်ပြခဲ့ပေသတည်း။
အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်များ၏ အရည်အသွေးမြင့်စိတ်ဓာတ်ကျယ်ပြောများပြား ပါစေသော်ဝ်
နယ်လ်ဆင် ပရိုက်စ်: အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်များ၏ အရည်အသွေးမြင့်စိတ်ဓာတ်ကျယ်ပြောများပြား ပါစေသော်ဝ်
ဘပ္ပတစ္စတွေလိုပါပဲ၊ မွတ်စလင်မ်တွေထဲမှာလည်း အသင်းခွဲတွေ အများကြီးပါ။ သတင်းတွေထဲမှာ တော့ စွန္နီနဲ့ ရှီယာဆိုပြီး အများဆုံး ပါရှိတတ်ပါတယ်။ စွန္နီတွေထဲမှာ ဟနဖီ၊ ရှာဖီ၊ မာလိကီနဲ့ ဟမ်ဘလီဆို တဲ့ ဥပဒေပြုကျောင်းကြီးများရှိပါတယ်။
ဆော်ဒီအာရေဗျမှာအဓိကအခြေပြုတဲ့ အသင်းကတော့ ရန်လိုမှုအများ ဆုံးရှိတတ်တဲ့ ၀ဟာဘီပါပဲ။ အမေရိကန်ရဲ့ထောင်တွေထဲမှာတော့ ၀ဟာဘီတွေက prison chaplain လို့ခေါ်တဲ့ ထောင်သားများကို တရားဟောတဲ့မွတ်စလင်မ်ဘာသာရေးဆရာများဖြစ်ကြပြီး ထောင် တွေမှာသူတို့ကိုပဲအများဆုံး ခန့်ထားတတ်ပါတယ်။
လူသိနည်းတဲ့ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အဟ်မဒီယာ မွတ်စလင်မ်လှုပ်ရှားမှုပါ။ အဟ်မဒီမှာလည်း နှစ်သင်းကွဲပါသေးတယ်။ ၁၉၂၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေက အမေရိကန်မှာ အစပြုခဲ့တဲ့ အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ် တွေကတော့ အမေရိ ကန်ရဲ့ ရှေးဦးအကျဆုံး မွတ်စလင်မ်အသင်းအဖွဲ့ပါပဲ။ အခြားတစ်သင်းကတော့ အစ္စလာမ်ပြန့်ပွားရေး အတွက်ရည်သန်တဲ့ လာဟိုရ်အဟ်မဒီလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။
အဟ်မဒီတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ အစ္စလာမ်သာသနာအား မူရင်းအတိုင်းကျင့်သုံးတဲ့ မွတ်စလင်မ် များအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့ ပါကစ္စတန်စတဲ့နိုင်ငံအချို့မှာ တော့ သူတို့ကို မွတ်စလင်မ်အဖြစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ ဒီပြဿ နာကို မွတ်စလင်မ်တွေဖာသာ ဆုံးဖြတ်ဖို့ ချန်ထားရစ်ခဲ့ပါ့မယ်။
သေးငယ်လှတဲ့အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်လှုပ်ရှားမှုကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးဖို့ဆောင်ရွက်ကြသလို ဓားလက်နက်ကိုင်ဆောင်တဲ့ဂျီဟားဒ်ကိုလည်း မယုံကြည်ကြပါ။ ကျွန်တော်တို့ (အမေရိကန်) အသိုင်း အဝန်းမှာတော့ သူတို့ကတက်ကြွစွာလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ကြက်ခြေနီသွေးလှူဒါန်းဌာန တွေကိုစပွန် ဆာပေးခြင်းစတဲ့ လူ့အသိုင်းအဝန်းအကျိုးပြုအစီအစဉ်တွေ အမျိုးမျိုးကို ပြုလုပ်ကြပါတယ်။
ဂျီဟားဒ်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ အစ္စလာမ်အများစုကြီးနဲ့ရောပြီး သူတို့(အဟ်မဒီများ) ကိုသတ်မှတ် ကြတာကို သူတို့က sensitive (မလိုလား) ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဘပ္ပတစ္စတွေထဲက အချို့အဖွဲ့အစည်းဝင်အဖြစ် (သမုတ်ခံရရင်) ခါးခါး သီးသီးဖြစ်တတ်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒါမျိုးကိစ္စတွေကတော့ ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ ကံမကောင်းအ ကြောင်းမလှ (ဘူးလို့ပြောရမှာပဲ)၊ အစ္စလာမ်မစ်ဂျီဟားဒ်နဲ့ဆက်စပ်တဲ့သတင်းတွေ့တိုင်း (မွတ်စ လင်မ်တွေဘက်ကဆန့်ကျင်) သတိပေးမှုပြုလုပ်တာမျိုး မျှော်လင့်မနေပါနဲ့။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဆီ ကလွဲလို့ပေါ့။
သူတို့တွေ(မွတ်စလင်မ်တွေ)က ဂျီဟားဒ်လှုပ်ရှားသူတွေကိုဆန့်ကျင်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆို မယ်ဆိုရင်တော့ အပြုသဘောဆောင်သတင်းမွှေးတွေထွက်ရှိလာနိုင်မှာပါ။ သူတို့တွေက ခရစ်ယာန် များ နဲ့အဆက်အဆံရှိနေခြင်းပတ်သတ်ပြီး သူတို့ကိုယ်သူတို့ငြင်း ချက်ထုတ်အကာအကွယ်ယူဖို့ အတွက် အင်အားစိုက်ထုတ်ကြပါတယ်။ အစ္စလာမ်မစ်ဂျီးဟားဒ်လှုရှားသူတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ အသံမထွက်ကြတာဘာကြောင့်လဲ။
အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကတော့ အဲဒါမျိုးနေနေကြရတာက သူတို့အတွက်ပျော်ရွှင်စရာဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နေမှာပါ။ ဂျီဟားဒ်ကိုယုံကြည်ကြတဲ့မွတ်စလင်မ်တွေက ဂျီဟားဒ်ဆန့်ကျင်သူတွေကို ရန်သူတွေ လို့သဘောထားတတ်ကြပြီး ကျိန်စာပို့ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုအလုပ်ခံရသူတွေထဲမှာ အဟ်မဒီတွေပါပါ လိမ့်မယ်။
အဟ်မဒီတွေက လှပခန့်ညားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို(အခုလို) ပြောကြပါတယ်။ တစ်ရံရောအခါမှာ ခရစ်ယာန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ကိုတွေ့ဆုံဖို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ တွေ့ဆုံနေ စဉ်အတွင်းမှာ ခရစ်ယာန်တွေကဘုရားဝတ်တက်ချိန်ရောက်လို့ ဘုရားဝတ်တက်ပါရစေကြောင်း ပြောတဲ့အခါ တမန်တော်မုဟမ္မဒ်က ကျွန်ုပ်၏ဗလီထဲမှာပဲ ဘုရားဝတ်တက်နိုင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သလို ခရစ်ယာန်တွေကလည်း ဗလီထဲမှာပဲ ဘုရားဝတ်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဗလီထဲကိုဝင်တဲ့အခါ ရရှိတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ယှဉ်ရင် အထက်ပါဖော်ပြချက်က ဆန့်ကျင် ဘက်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ခရစ်ယာန်အမှတ်အသားလက်ဝတ်လက်စားတွေဝတ်ပြီး ဗလီတွေ ထဲဝင်လို့မရပါဘူး။
ဖော်ပြပါအဟ်မဒီတွေပြောပြတဲ့အဖြစ်အပျက်က မွတ်စလင်မ်တိုင်းပြည်တွေမှာ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုး ကျောင်းတွေကို ဗုံးထောင်မှု၊ မီးရှို့မှုစတာတွေနဲ့ယှဉ်ရင်လည်း ပြဒါးတလမ်းသံတလမ်းဆိုသလို အဆန့်ကျင်ကြီးဆန့်ကျင်နေပါတယ်။
မွတ်စလင်မ်တိုင်းပြည်တွေမှာ ခရစ်ယာန်စစ်သားတွေအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့ ဘုန်းတော် ကြီးတွေ၊ သူတို့ရဲ့ခရစ်ယာန်အဆောင်အယောင်တွေဝတ်ခွင့်မရတာကလည်း စိတ်အတွင်း အဇ္ဈတ္တက နေ ဖော်ထုတ်ပြသလိုက်တဲ့ (ခံစားချက်များ) ပဲမဟုတ်ပါလား။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖယ်ဒရယ်အစိုးရကတော့ မွတ်စလင်မ်တိုင်းပြည်တွေမှာ ဗလီတွေပြန်လည်တည် ဆောက်ဖို့အတွက် အခွန်ထမ်းပြည်သူတွေရဲ့ ငွေကြေးကို အသုံးပြုနေပါတယ်။ ကုရ်အာန်ကို (မီးရှို့) ဖျက်ဆီးခံရတယ်ဆိုရင်လည်း မိမိတို့ရဲ့ ဝမ်းနည်းမှုနဲ့ ရှက်ရွံ့မှုကို ဖော်ပြကြပါတယ်။
သူတို့သည် နိုင်ငံတကာပြဿနာများတွင် ဩဇာလွှမ်းမိုးသော အသံတစ်သံဖြစ်လာပါစေ။
အမေရိကန်အများစုက မွတ်စလင်မ်များကို မေးငေါ့နေခြင်းများအား သူတို့နားလည်သဘောပေါက် နိုင်ပါစေ။ ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူများကလည်း အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်များနှင့် တွေ့ဆုံ ကြုံကြိုက်သည့်အခါ သူတို့၏ ကွဲပြားခြားနားသော အရည်အသွေးကို သက်သေခံများဖြစ်ပါစေ။
ကျွန်တော်၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှ အစ္စလာမ်နှင့် အချိန်အလိုက်တင်ဆက်နေသည့်အခြားအကြောင်း အရာ များကိုလည်း လာရောက်ဖတ်ကြည့်လှည့်ပါ။ www.nelsonprice.com.
The Rev. Dr. Nelson Price is pastor emeritus of Roswell Street Baptist Church. Contact Price at nlprice@aol.com.
The Marietta Daily Journal - Nelson Price May professed spirit of Ahmadiyya Muslims increase အား မြန်မာပြန်ပါသည်။